'Furiosa,' 'Mad Max' Rakibidda, Waxay Bilaabaysaa Inay Duubista Ka Bilawdo New South Wales
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Furiosa,' 'Mad Max' Ku Xidhitaanka, Waxay Bilaabaysaa Inay Duubista Ka Bilawdo New South Wales
'Furiosa,' 'Mad Max' Ku Xidhitaanka, Waxay Bilaabaysaa Inay Duubista Ka Bilawdo New South Wales
Xanaaqsan, Cusub Mad Max filim iyo sheeko asal ah oo ka mid ah jilayaasha caanka ah ka Mad Max, cadho Road, wuxuu ku jiraa diyaar garowgii ugu dambeeyay si uu filim ugu bilaabo New South Wales, Australia. Filimkan ayaa lagu soo waramayaa inuu noqon doono kii ugu weynaa ee abid laga sameeyo Australia.
Anya Taylor-Joy (Mutaalayaasha cusub, Witch) wuxuu qaadan doonaa doorka muhiimka ah ee uu la jilayo Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok). Hemsworth wuxuu la soo muuqday abuuraha ruug cadaa George Miller shirkiisa jaraa'id maanta si uu uga hadlo qorshayaasha mashruucan oo lagu wado inuu soo baxo June 23, 2023.
Filimku waxaa lagu soo waramayaa inuu $ 350 milyan oo AUD ku ridi doono aagga isla markaana uu ka abuuri doono meel xaafadda ah 850 shaqo.
Mad Max, cadho Road wuxuu ahaa filim caan ah oo kasbaday adduun dhan 370 milyan oo doolar, cutubkan xiga ee aadka loo wada sugayo ayaa si fudud ku samayn kara intaas iyo in ka badan. Charlize Theron oo ah Imperator Furiosa waxay ka mid ahayd jilayaasha ka soo muuqday filimkaas, waxayna noqon doontaa mid xiiso leh in la barto sheekadeeda gadaal.
Agaasimuhu wuxuu ku cadeeyay saxafiga in xasiloonida Warner Bros. ay fure u ahayd horumarka mashruuca.
“Tan iyo markii aan bilownay Road Ciriiri Waxaan u maleynayaa inay jiraan lix nidaam oo kala duwan oo ka jira Warner Bros, ”ayuu yidhi. "Hada waa la xasiliyay waxeeyna awoodaan inay asal ahaan fiiro gaar ah u yeeshaan filimada ay rabaan inay sameeyaan waana mid ka mid ah."
Diyaar ma u tahay cutub kale oo ka mid ah Mad Max Sagaal? Marabtaa inaad waxbadan ka barato Xanaaqsan? La soco iHorror dhammaan wararka ugu dambeeyay markii ay diyaar noqoto!
Anya Taylor-JoyChris HemsworthXanaaqsanGeorge MillerMad MaxWaylon Jordan
Dib-u-eegid: 'Wiilasha Ka Soo Baxay Cadaaladda Gobolka' Waxay Ku Kordhinaysaa Dhibcaha Vampire Vore Cusub
Jacayl, Dhimasho + Rootiyeyaal Volume 2 Trailer-ka ayaa halkan u jooga inuu Maskaxdaada ka shubo